Isteefaanii Firaappaart murteesituu tapha Suppar Kaappi har'aati - BBC News Afaan Oromoo
Murteessituun tapha kubbaa miilaa lammii Fraans Isteefaani Fraappaart dubartii yeroo jalqabaaf tapha waancaa dorgommii dhiiraa taphachiiftu taate.
Fraappaart tapha waancaa Suppar Kaappii Liivarpuuliif Cheelsii gidduutti tapahatamu kana tapahachiisuun waan guddaa miti namoonni jedhan jiraataniis, seenaa dorgommii waancaa kilaboota Awrooppaa dhiirotaarratti murteessituu dubaraa ishe jalqabaa taateetti.
Tapha waancaa addunyaa dubartootaa ji'oota dura xumurame kan taphachiiftee fi Liigii isa guddicha Fraans taphachiisaa kan jirtu Fraappaart, tapha har'aa kana tapahachiisuun dhibbaa adda narratti uumu hin qabu jetti.
Sirriitti leenjineerra, taphoota hundaaf of qopheessinee waan jiruuf hin sodaannu'' jetti dubartiin ganna 35 Fraappaart.
Jalqaba ji'a kanaatti tapha gareelee Chaampiyoonsi liigii Arwooppaa fi Yuurooppa liig injifatan walitti fidu kanarratti murteessitootni dirree keess jiran sadanuu dubartoota ta'an keessatti erga filatamtee ''jireenyi koo jijjiirameera'' jetti.
Waanca Addunyaarratti waahillan ishee waliin taphachiisan lammiin Itaalii Maanu'eela Nikolosi fi kan Ayeerlaand Misheel Oniiyeel gargaartota.
Gargaaraan murteessituu kana afraffaan Kuniyeet Kaakir taphachiisaa lammii Tarkiiti.
''Addunyaa guutuutti beekamtuu ta'eera. Liigii 1ffaa Fraans keessattis ramadameen hojjechaa jira waan ta'eef miira jiru nan beeka akkamittiin akkan to'adhus beeka'' jetti Fraappaart.
Dubartoota birootti hamilee hora
Leenjisaan Cheelsii Fraank Laampaard tapha kana taphachiisuuf Fraappaart filatamuutti gammaduu dubbateera.
''Seenaa kana keessaa qooda fudhataa ta'uu kootti hedduun gammadee, waan ta'uu malu.''
Taphachiiftotni dubaraa dorgommii dhiirotaa irratti ramadamuun baratamaa dhufaa jira. Bondosliigaa Jarmanii keesattis dubartiin Bibi'aanaa Isteenhaawus taphachiisuutti jirti.
Primeerliigii Ingiliz keessatti garuu gargaartuu murtee tokko qofatu hirmaachaa jira.
Oneel ''tapha kana taphachiisuuf filatamuun isaanii dubartoota jajjabeessa, shamarraan ol dhufaa jiranittis hamilee horaa'' jetti.
Hoogganaan murteessitoota taphaa UEfa Robeertoo Roseetii ''isheen taphachiiftota dubartootaa kumootaan lakkaawaman addunyaa guutuurra jiran hamilchiisti'' jedha.
''Sababni isaan filatamaniif jaboo waan ta'aniif'' jechuunis dubbate.
Taphni kun galgala kana sa'aa afur irraa eegalee Tarkii Istaanbulitti taphatama.